Mari-nehupfumi, 01 Chikumi 2016
Chitatu 1 Chikumi 2016
Chikumi 01, 2016
Chichizvarwa cheZimbabwe Chinoshanda muSouth Africa kuMapurazi Choomerwa neHupenyu.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Melody Sibanda vanoshanda kumapurazi emu South Africa vanoti hupenyu hwuri kuvawomera sezvo vakasiya vana vavo vaviri kumusha vasina anovachengeta.
Vanhu Votaura nezveMubatanidzwa weMapato ezveMatongerwo eNyika
Veruzhinji vanoti vanotambira kubatana kwakaita mapato mashanu anopikisa hurumende yeZanu PF nemusi weChitatu vachipa kurudziro yekuti mapato ose anopikisa anofanira kuita mushandirapamwe kuti akunde musarudzo dzinotevera.
Chivabvu 30, 2016
Nzou Shanu Dzourayiwa neMuchetura
Bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemiti reForestry Commission rinoti pane nzou shanu dzakaurayiwa kuAmandundumela kuMatabeleland North nemuchetura we cyanide.
Nyanzvi Mune zveUpfumi Inoti Kunonoka Kubuda kwemaBond Notes Kwowedzera Kushaikwa kweChivimbo neMari iyi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kushandurwa kwemazuva achaburitswa mari itsva ye ma bond notes kunotowedzera kuderera kwechivimbo muvanhu.
Chivabvu 26, 2016
Sangano reZimta Rotyira Kuti Nhengo Dzaro Dzichanetseka Kuwana Mihoro Yadzo kuMabhanga
Nyazvi munyaya dzezvehupfumi uye vanhuwo zvavo munyika vari kushora zvikuru vemabhanga uye vemuzvitoro nekuvabhadharisa mari dzemitero kwavari kuita kuti vatore mari dzavo mumabhanga kana kuwana mari muzvitoro.
Sangano reYou Count International Robatsira VeChidiki
Sangano rakazvimirira roga reYou Count International rinoti rasimbaradza kubatsira vechidiki vari munyaya dzezvekurima riine danho rekuti vasanonge svosve nemuromo.
Sangano reYARD Rinoti veChidiki Ngavapinde Mukufora kweZanu-PF Asi Vachiudza VaMugabe Kuti Ngavachienda Pamudyandigere
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reYouth Advocacy for Reform and Democracy kana kuti YARD VaDelight Benge vanoti vechidiki vemunyika vanofanirwa kunoratidzirawo pakufora kweZanu-PF nemusi weChitatu vachiudza mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe kuti vanofanira kuenda pamudyandigere.
Vechidiki veZanu PF Vopomerwa Mhosva yeKumanikidza Vanhu Kupinda muHurongwa hweOne Million Man March
Bato riri kutonga reZanu PF rinonzi riri kumanikidza vakuru vezvikoro uye makomiti eSchool Development Committee muManicaland kuti rivape madutavanhu ezvikoro ekutakurisa vechidiki vari kuda kunofora kuguta reHarare, kuOne Million Man March.
Chivabvu 23, 2016
Dambudziko reMari Rowedzera Munyika
Dambudziko rekushomeka kwemari rinonzi riri kuramba richiwedzera munyika izvo zvinonzi zvave kukonzera mitsetse yakareba chose mumabhanga mazhinji vanhu vachida kutora mari dzavo.
Chivabvu 20, 2016
Zvimwe Zvizvarwa ZveZimbabwe Zviri MuAmerica Zvobvisa Mari Yekubastira Mudzimai Ari Kurarama neHIV/AIDs kuEpworth
Zvimwe zvizvara zveZimbabwe zviri muAmerica kuNew York, amai na baba Bernard Domingo vanoti vakabatwa nenyaya yakabuda paStudio7 yematambudziko arikutarisana na amai Ana Lungisani varikurarama nehutachiwona hweHIV/AIDs kuEpworth zvekuti vakabva varonga kuvabatsira.
Chivabvu 17, 2016
Huori Muhurumende Hoendesa Nyika kuMawere
Nyaya yehuori yanetsa munyika zvikuru mumakambani ehurumende ayo ari kupomerwa mhosva yekuita chikiribidi munyaya yematenda ane mari inosvika mabhiriyoni emadhora.
Vaive Vashandi veKanzuru yeChitungwiza Vanoti Vacharamba Vachiratidzira
Vaive vashandi vekanzuru yeChitungwiza makumi maviri vakasungwa neChishanu chapfuura mushure mekuratidzira pamahofisi ekanzuru iyi, vakundikana kumira pamberi pedare sezvanga zvakatarisirwa.